जीत बहादुरको नासो - Beemapost.com
१७ असार २०७९
जीत बहादुरको नासो
कल्पना पौडेल “जिज्ञासु”
२८ श्रावण २०७८, बिहीबार ००:०३
भारतको केरलामा कार्यरत जीत बहादुर दुई महिनाको बिदा लिएर नेपाल फर्केको थियो । उता घरमा बुढा भएका बुवा आमाको साथमा श्रीमती र तीन छोरीसहित छ जनाको परिवार थियो । गाउँको घर, थोरै मात्रै जग्गा जमिन, त्यसमा खेतीपाती गरेर जेनतेन मुख र मुठ्ठी जोड्ने काम चल्दै थियो । जीतबहादुरकी श्रीमती मैनाले तीन ओटा बाख्रा पालेकी थिईन् । छोरीहरु सानै थिए । बुढा भएका बुवा आमा र साना बाल बच्चालाई गोरसको लागि दएउटा दुहुनो भैंसी गोठमा थियो ।
आज लाहुरे आएको दिन घरमा छिमेकीहरु जम्मा भएका थिए । तीन बर्षपछि परिवार आफन्त र छिमेकीलाइ भेट्न पाउँदा जीतबहादुर असाध्यै खुशी थियो । छोरीहरु नयाँ लुगा लगाएर चकलेट खाँदै रमाउंदै, खेल्दै थिए ।
भारतमा हुँदा जीतबहादुरसँगै काम गर्ने गोपालमानको घर पनि त्यहीँ गाउँमा थियो । गोपालमानले केही सामान घर पठाएको हुँदा नासो छोड्न भन्दै जीतबहादुर माथिल्लो गाउँतिर लाग्यो । नयाँ बिहे गरेर आएकी अनितासँग भेट भयो । अनिताले गाउँको स्कुलमा पढाउने गर्थिन् । जीतबहादुरलाइ देख्न साथ अनुमान लगाइन यो लाउरे पक्कै मैनाको श्रीमान हुनुपर्छ भनेर । अनिताले उनीहरुको बच्चालाई पढाउँथिन् ।
अनिताः नमस्कार सर !
हजुर मैनाको श्रीमान है ? कता हिड्नु भएको ? आरामै आइपुग्नु भयो ?
जीतः हजुर म मैनाको श्रीमान हुँ ! राम्रै आइपुगे । तर मैले हजुरलाई चिन्न सकिन नि ?
अनिताः म अनिता थापा हजुरकी छोरीहरुलाई पढाउँछु । छोरीहरु अनि मैनाले हजुरको कुरा गरिरहन्थे अनि सोधकी ।
(एकछिन् कुराकानी गरि दुबै छुट्टिए ।)
जीतबहादुरले साथीको घर गएर नासो बुझायो र परिबारलाइ भेटेर आफ्नो घर फर्कियो ।
दिनहरु बित्दै गए । जीत बहादुरको फेरि भारत फर्किने बेला नजिकिँदै थियो । यता, तीन छोरी हुँदाहुँदै सामाजिक दवावमा छोरा जन्माउने चाहनाले मैना फेरि गर्भवती भई । पढेलेखेकी बुझेकी अनिताले धेरै सम्झाउने कोशिस गर्थिन् तर मैनाको सोच परिवर्तन गर्न सकिनन् । अनिता स्कुल पढाउने कामको अलावा जीवन बीमाको काम गर्थिन ।
चाडबाड सकिए, हिउँद लाग्यो, घरमा खर्चको जोहो गर्नुपर्ने दिन आउदै थियो । अन्ततः जीत बहादुर पुनः भारत जानुपर्ने भयो ।
आज जीतबहादुर भारत जागिरमा फर्किने दिन । गाउँलेहरु भेटघाट गर्न घरभरि जम्मा भएका थिए । कसैले आफ्ना छोरालाई पठाउन गुन्द्रुक र अचारको पोको लिएर आएका थिए । बाहिर सबैजना बसेर गफगाफ गर्दै थिए ।
यत्तिकैमा जीतबहादुरका बुढा बाउले दुखेसो पोखेः अब कहिले आउँछस् नि जितु ?
हामी डाडामाथिका घाम भैगयौं, कति बेला अस्ताउने हो थाहा हुदैन । फेरी भेट्न पाइने हो कि होइन ।
यति भन्दै सुक्क सुक्क रुन लागे ।
आमाले छोरालाई बाटोमा खानेकुरा बनाएर झोलामा राख्दै भनिन्ः बाबु केही खानेकुरा बाटोमा खानू, केही डिउटीबाट आउँदा भोकाएको बेला खाएस है ?
अब कहिले आउने होस् तँ आउँदा सम्म मरिन्छ कि बाबु । (आमाको पनि उस्तै कुरा)
आमाः चाडै फर्केस है …
मझेत्रोले आसुँ पुछ्दै आमा भित्र पसिन् ।
बिदावारी गरी जीतबहादुर भारततर्फ लाग्यो । अलि तल पुगेपछि शिक्षिका अनितालाई भेट्यो, केहीबेर कानेखुसी गरे । जीतबहादुरले झोलाबाट केही समान निकालेर अनितालाई दिँदै अघि बढ्यो । गोरखपुरको रेल भेट्न हतार भैसकेको थियो ।
सुनौलीमा पुगेर खाजा खायो । बाटो खर्चको लागि भारतीय पैसा साट्यो र गोरखपुरको बसमा चढ्यो । दुई तीन घन्टाको यात्रा पछी गोरखपुरको रेल स्टेसन पुग्यो । त्यहाँ अरु नेपालीहरुसँग भेट भयो । केरला जाने साथीसँगै टिकट काटेर रेलमा चढेर जीत बहादुर आफ्नो गाउँ छोडेर टाढाको यात्रा तय गर्दैछ ।
मनभरी परिवारको सम्झना आयो । यो लाहुरे जिन्दगी न परदेश लागेर टन्न पैसा कमाउन सकिने न परिवारसँग बसेर आँटो पिठो खान पुग्ने । घरिघरी आफैलाई धिक्काथ्र्यो । आफ्नो गरिवी प्रति । राज्यले देशका युवालाई स्वदेशमै रोजगार नदिँदा बिदेशिनु परेको ब्यथाले भरिएको र कुडिएर अमिलो भएको मन लिएर रेलको आवाजसँगै उसको यात्रा छोट्टिदै थियो ।
छकछक् छकछक् गदैै रेल आफ्नै गतिमा हुईँकिँदै थियो । जीतबहादुरलाइ कटक्क पेट काट्यो । शौचालयभित्र अर्को मानिस रहेछ । ढोका खुलेन । पालो पर्खिरहेको बेला झुक्किएर जीतबहादुर रेलबाट खस्यो । उसको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।
जीतबहादुर रेलबाट खसेको खवर अर्को स्टेसनमा पुगेपछि बल्लसँगै हिडेका साथीले थाहा पाए । घटनास्थल फोन गएर पुलिसले जानकारी गराए । नेपालीहरु मिलेर दाहसँस्कार गरे ।
यता घरमा पुरै परिवारको बोझ एक्लैले टाउकोमाथि बोकेर हिडेको व्यक्ति दुनियाँबाटै हरायो । केहीदिन पछि घरमा खवर आयो । बुढा भएका बुवा आमा स–साना छोरी गर्भवती स्वास्नीको बिजोग भयो । सबैजना रुन कराउन लागे गाउँलेहरु आए । सम्झाउने बुझाउने र लागे ।
आफै डाँडामाथिको घाम, छोराको काजकिरिया गर्नु पर्यो बुढेसकालमा पर्नु शोक पर्यो । जवान छोरो गयो म बुढो किन बाच्नु पर्यो भन्दै बुवा मुर्छा परे । बृद्ध शरीर अनि शोकमा छोराको काजकिरिया गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे जीत बहादुरका बाबु अनि छिमेकीलाइ क्रिया गर्न लगाइयो ।
चौध दिनपछि साहुहरु ऋण उठाउन आए । जीतेले यति लगेको थियो भनि नभएको पैसा पनि माग्न थाले । बिचरा घर एक पैसा छैन के दिनु ? मौकाको फाइदा लुट्नेले कसैले भैसी फुकाउन लागे कसैले बाख्रा । घरमा बिचल्ली भयो बुवा थला परे । छोराको खवर सुनेदेखि बृद्ध बाबु आमा शिथिल बन्दै गइरहेका छन् । पतिको नासो यस पटक छोरा जन्माउने आशामा रहेकी मैना गर्भवती अवस्थामा शोकले भोक न प्यासको अवस्थाबाट जीवन गुजार्दै थिईन् ।
गाउँका मुखियाले घर खाली गर्देउ भन्दै थिए । मैना बिरामी हुँदा जग्गा धितो राखेको स्मरण गराए । गाउँलेले टुलुटुलु हेरिरहेका थिए । साहुको ऋण कसले तिर्न सक्छु भन्ने कोही थिएनन् । बिचरी मैना हतास, निराश र स्तब्ध थिईन् । बज्र उनको शिरमाथि बजारिएको थियो । गाउँले आउँथे, सान्त्वन्ना दिएर जान्थे, गर्ने, दिने कोही थिएनन् ।
महिनादिनको मासिक सकिएको थियो, मैना र बृद्ध आमा बुवा बसेर कुराकानी गर्दै थिए । अलि तलबाट जीत बहादुरको कुरा गर्दै तीनजना सुकिला मान्छेहरु घरतिरै सोझिएर आउँदै थिए । जीत बहादुरका बृद्ध बाबु आत्तिए, फेरि को के माग्न वा भन्न आएका हुन् भन्दै डराए ।
सबैभन्दा अगाडि शिक्षिका अनिता थिइन् । अर्का एक जना वडा अध्यक्ष र अर्का एक जना नचिनिएका पुरुष थिए ।
जीत बहादुरका बुवाले शिक्षिकलाई अघि लगाएर वडा अध्यक्ष आफै आएको देखेपछि नातिनीहरुले केही बिगारेका पो थिए कि ? वा छात्रवृत्ति दिन्छौं भन्दै आएछन् वा जीत बहादुरले अरु पनि ऋण लिएको थियो र उठाउन पो आएकी भन्दै अनुमान गर्दै बसे ।
पीडिमा बसेकी मैना मलिन भएर बसिरहेकी थिईन् । एकैछिनमा गाउँका अरु भद्रभलाद्मीहरुपनि भेला भए । आगनीको पुत्र बियोगमा परेका बुढा बा–आमा टोलाईरहेका थिए ।
अनिताले मैनालाई अँगालो हालिन् । सानो भेला नै भैसकेको थियो । अनिता एक जीवन बीमा कम्पनीकी अभिकर्ता थिईन् । उनले जीत बहादुर विदेशबाट आउने वित्तिकै छलफल गरेर ४० लाख रुपैयाँ बीमाङ्क रकमको जीवन बीमा गरी पहिलो किस्ता बुझाएर गएको बताईन् । बीमा बाँचेमा आफैले पाउने र कुनै कारणबश मृत्यु भएमा आफूमा आश्रित परिवारले पाउने लाभ भएकोले सोही जोखिम बापतको दावी भुक्तानीको लागि आफूहरु आएको जानकारी गराइन् । अनिताले झोलाबाट एउटा फाइल निकालिन् । मैनालाई हस्ताक्षर गर्न लगाईन् । वडाध्यक्षको हातबाट मैनालाई चालिस लाखाको चेक हस्तान्तरण गरियो ।
अध्यक्षले छोटो मन्तब्यमा भनेः जीतबहादुरजीले अनिता म्याडम मार्फत जीवन बीमा गर्नु भएको थियो । दुर्घटनाबाट उहाँको दुखद निधन भैसकेको हुनाले उहाँलाई हामीले पाउन नसकेपनि उहाँले परिवारप्रति छोडेको यो जिम्मेवारी हो । यो रकम हजुरको परिवारको पीडामा मलहम बन्न सकोस् । जीतबहादुरप्रति हाम्रो श्रद्धा छ ।
मैनाले लामो सास फेरिन्, पेटमा हुर्कदै गएको जीत बहादुरको गर्भ अनि उनले छोडेर गएको नासो सम्झिन् । उनका लागि सबै सपना जस्तो लाग्यो । मैनालाई समुहबाट ऋण काडेर जबर्जस्ती नौगेडी र झुम्का किन्दिन बाध्य पारेको याद आयो । गहनाकै लागि कति झगडा गरको स्मरण समेत गरिन् ।
जीतबहादुरले गाउँले साथी गोपालमानसंग पैसा सरसापट गरेको कुरा अनिताबाट थाहा भयो ।
सो भेलामा मैनालाई केही बोल्न मन लाग्योः मैले मेरो राजालाई किन बुझ्न सकिन ? कहाँ जानुभयो मेरो प्रिय ? आफु जाँदा जाँदै हाम्रो लागि यति ठुलो महान् काम गरेर छोड्नु भएको रैछ बल्ल मेरो होस् खुल्यो बुद्धी पस्यो तर के गर्नु मैले हजुरलाई गुमाई सके । उनी छाति पिटी पिटी रुन थालिन् ।
यदि आज यो पैसा आउने थिएन भने हाम्रो घर बास उजाडिने थियो । म कहाँ जान्थे होला ? बृद्ध अवस्थाका सासु ससुरा र यिनी लालाबाला कहाँ लैजान्थे होला । जिन्दगीको केही भरोषा नहुँदो रैछ । भोलि म पनि रहिन भने यो परिवारको मेरा लालाबालाको अबस्था के होला ?
एकैछिनमा शरीरमा भएका सबै गहना फुकालेर एउटा मुट्ठीमा राख्दै हात उचाल्दै भनिन्ः
अब मैले यी गहना लगाउँदिनँ । यी गरगहना र मेरो श्रीमानको नासो यो पेटको बच्चा जन्मिएपछि यिनै गहना बेचेर सन्तानको नाममा बीमा गरिदिन्छु । बार्षिक रुपमा किस्ता तिर्न नसकँुला त्यसैले ऋण तिरेर बचेको पैसा सबै बच्चाको नाममा फिक्स बीमा जम्मा गरिदिने बाचा गर्छु । गाउँले सबै स्तब्ध भए । बीमाको महत्व केहीहदसम्म बुझे ।
अनिताको काखमा घोप्टो परेर रोइरहिन् ।
-गैडाकोट नवलपुर, हाल खजुरा बाँके
4 thoughts on “जीत बहादुरको नासो”
shankar asant says:
August 12, 2021 at 6:59 am
अलिकति समय छुट्याएर ‘जीतबहादुरको नासो’कथा पढुम् । गुनासो गर्ने ठाम् रहने छैन । सामाजिक बिषयबस्तुमा कथाकार कल्पना पौडेल ‘जिज्ञासु’ को कलमको जादू हेर्नुस् त
कल्पना पौडेल 'जिज्ञासु ' says:
August 14, 2021 at 2:11 pm
नमस्कार बन्धु कोइराला जी आरामै हुनुहुन्छ नि ? यति धेरै मिठो हौसला पूर्ण प्रतिकृयाको लागि हार्दिक आभारीछु | यो हौसलाले मलाई साहित्य लेखनमा थप उर्जा थपिनेछ मुरीमुरी धन्यवाद यहाँलाइ |
August 14, 2021 at 2:15 pm
नमस्कार शंकर जी आरामै हुनुहुन्छ नि ? यो साथ हौसलाको लागि सदैव आभारी रहनेछु | धन्यवाद हजुरलाई |
बन्धु कोइराला, झापा says:
August 12, 2021 at 1:28 pm
साँच्चै कति मर्मस्पर्शी लेख रहेछ । साहित्यमा कलम चलाउने गर्नु भएको रहेछ । कथा साहित्यिक, मन छुने खालको पाए । मैले पुरै पढे, यथार्थ जीवनसँग मेल खालको रचना गर्नु भएको रहेछ । सारै खुशी लाग्यो । म पूर्वको भएर होला भाषा चाही पश्चिमको जस्तो लवच आएको छ । पश्चिम क्षेत्रकै कथा भएकोले त्यस्तो आउनु स्वाभाविक नै पनि हो । जीवन बीमाबारे जनचेतना जगाउन यस्ता लेखरचनाहरु, साहित्य सिर्जनाहरु धेरै नै रचना गर्नु जरुरी छ । आगामी दिनमा कल्पना पौडेल जिज्ञाशु ज्युको लेख रचनाहरु पढ्न, शेयर गर्न पाइयोस् । सफलताको शुभकामना ।
बीमा कम्पनीहरुको कुल बीमाशुल्क संकलन १९ प्रतिशतले बढ्यो, ३६ प्रतिशतमा पुग्यो बीमाको दायरा
बीमा निर्देशिका २०७८ विरुद्ध निर्णायक संघर्षको तयारी हुँदै, आन्दोलन र निजि कम्पनी बहिस्कार एकैसाथ
गुराँस लाइफले दियो बीमितको परिवारलाई १३ लाख रुपैयाँ
बीमा समितिद्धारा पुनर्बीमा सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी, शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्न पाइने
नबिल बैंकको सिइओमा ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना नियुक्त, आजदेखि कार्यभार सम्हाल्ने
बीमा समितिले नेपाल लाइफसँग किन माग्यो सपष्टीकरण, यस्तो छ कारण
सूर्या लाइफले व्यतित बीमालेख नविकरणमा ब्याज छुट दिने
निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको बीमाशुल्क आर्जन ३४ अर्बमाथि, शिखर अग्रस्थानमा (अन्यको अवस्था कस्तो)?
आइएमई जनरल, नेपाल र प्रुडेन्सियल मर्जरबारे छलफल, नेपाल र प्रुडेन्सियल अनिच्छुक
जन्मदिनको अवसरमा श्रीमतीलाई २५ लाखको बीमा पोलिसी उपहार
रिलायबल नेपाल ओखलढुङ्गा शाखाका डिएम सम्पर्क विहीन हुँदा जीवन बीमा र आर्थिक कारोबार नगर्न बीमितलाई आग्रह
पुनर्बीमा कम्पनीको ऐतिहासिकता, महत्व र चुनौति
लागत बढेको भन्ने नेपाल आयल निगमको दावी झूठा, आईओसीसँगको नक्कली खरिद मूल्य देखाई जनता झुक्याइदै
अर्थमन्त्री शर्मा तीन अर्ब काण्डमा मुछिए ! हिमालयन रिसँग जोडियो नाम
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई लाईसेन्स दिँदा कान्तिपुरका मालिक सिरोहियालाई १० करोड
एनआइसी एशिया बैंकको मोबाइल बैकिङ्ग, आइसर्भ, इन्टरनेट बैकिङ्ग अब निःशुल्क चलाउन पाइने
शाओमीको रेड्मी नोट ११ प्रो नेपाली बजारमा, यस्ता छन् बजारमूल्य र विशेषता
थाई स्माइल एयरवेजको काठमाडौँ–बैङ्कक उडान सुरु
रैराङलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै रिडी हाइड्रोपावरको विशेष सभा सम्पन्न, प्राप्तिपछि चुक्तापुँजी सवा १ अर्ब पुग्ने
गरिमा विकास बैंकद्धारा प्रहरीलाई जनचेतनामूलक सामाग्री हस्तान्तरण
इङ्वा हाइड्रोपावरले १८ लाख कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्ने, बोर्डमो दियो निवेदन
मन्जुश्री फाइनान्सद्धारा हेटौंडामा २६औं शाखा विस्तार
४,७६७ जना ऋण लिन नपाउने गरी कालोसूचिमा, चेक बाउन्स भएपनि कालोसूचिमा परिने
भोलिबाट सबै बीमा कम्पनीहरु बन्द गर्ने उपत्यका प्रशासनको निर्णय, सरकारी र संस्थानहरु समेत बन्द हुने
नेपाल टेलिकमले भोलिबाट नयाँ प्याकेज सुरु गर्दै, १०० मिनेट सित्तैमा कुरा गर्न पाइने
सिइबिडी हाइड्रोपावरको आइपिओको नतिजा चारवटा साइटबाट हेर्न मिल्ने
३०० घरहरु पुरिए, नौ जनाको शव भेटियो, ५५ भन्दा बढि अझै बेपत्ता
भोलिबाट साल्ट ट्रेडिङबाट ११०० मै ग्याँस, ६३ रुपैयाँमा चिनि उपलब्ध गराउने, कहाँ–कहाँ पाइन्छ किन्न ?
तपाईले सात लाखभन्दा बढि रकम बैंकमा जम्मा गर्ने वा निकाल्नु भएको छ ? राष्ट्र बैंकको निगरानीमा पर्नुहोला है?
तीन घण्टाभित्र लमजुङमा तीन भुकम्प, तेस्रो पटक ५.३ म्याग्निच्यूटको धक्का
राइनिसी मिडिया एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित ।
सम्पादक नबराज न्यौपाने
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता: २७६२/०७८-०७९
कार्यालय: पुतलीसडक, काठमाण्डौ
सम्पर्क नं.: 01-4535002
Contact (USA-Europe) +1-718-8389136
प्रतिक्रिया तथा समाचार [email protected]
मार्केटिङ सम्पर्क 9851323306, 9851323304
© २०१९ www.beemapost.com. सर्वाधिकार सुरक्षित